निरन्तर बजार के हो: यो के हो, यो कसरी काम गर्दछ, घण्टा र कम्पनीहरु | अर्थतन्त्र वित्त
निरन्तर बजार के हो
क्लौडी क्यासलहरू | 24/09/2021 20:10 | बोल्सा
शेयर बजार मा, प्रत्येक देश राष्ट्रिय कम्पनीहरु बाट बनेको आफ्नै बजार छ। यहाँ, स्पेन मा, हामी तथाकथित निरन्तर बजार छ कि १३० Iberian कम्पनीहरु सामेल छन्। तर निरन्तर बजार के हो? यस्ले कसरी काम गर्छ? घटना मा कि तपाइँ अर्थशास्त्र र वित्त को दुनिया मा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, यो तपाइँको लागी एक आवश्यक अवधारणा हो।
हामी मात्र महान प्रश्न को जवाफ दिन्छौं कि यो लेख को शीर्षक दिन्छ, तर हामी यो पनि कसरी निरन्तर बजार काम गर्दछ, यसको व्यापारिक घण्टा के हो र कुन कम्पनीहरु यो बनाउनेछन्।
1 निरन्तर बजार के हो र यो कसरी काम गर्दछ?
1.2 निरन्तर बजार कहिले खुल्छ?
2 के कम्पनीहरु निरन्तर बजार गठन?
निरन्तर बजार के हो र यो कसरी काम गर्दछ?
यदि तपाइँ शेयर बजार मा लगानी गर्न को लागी शुरू गर्दै हुनुहुन्छ, वा कम से कम यस विषय को बारे मा आफैंलाई सूचित गर्न को लागी, यो तपाइँको लागी निरन्तर बजार के हो पत्ता लगाउने समय हो। यो एक प्रणाली हो कि एक एकल शेयर बजार मा स्पेन मा चार स्टक एक्सचेन्जहरु लाई जोड्दछ। यस तरीकाले, शेयर बार्सिलोना, बिलबाओ, म्याड्रिड र भ्यालेन्सिया स्टक एक्सचेन्ज मा एक साथ सूचीबद्ध गर्न सकिन्छ। यो अपरेशन सक्षम गर्न को लागी, स्पेनी स्टक मार्केट इन्टरकनेक्शन सिस्टम (SIBE) भनिन्छ एक इलेक्ट्रोनिक प्लेटफर्म छ। यो प्लेटफर्म चार स्पेनी स्टक एक्सचेन्जहरु लाई काम गर्न को लागी यदि उनीहरु एक स्टक बजार थिए अनुमति दिन्छ। थप रूपमा, यो सम्भावित वारेन्ट वार्ता लाई एकीकृत गर्दछ, प्रतिक्रिया, स्टक र अन्य लगानी उत्पादनहरु।
यो १ 1989 was मा थियो जब स्पेन एक इलेक्ट्रोनिक प्रणाली को माध्यम बाट शेयर व्यापार शुरू भयो। त्यस समयमा, लगातार बजार सात स्टक को मूल्य संगै उदय भयो, अरु केहि छैन। आज 130 भन्दा बढी कम्पनीहरु यो मा सूचीबद्ध छन्। यसको भित्र, त्यहाँ IBEX ३५ मा सूचीबद्ध धितोहरु पनि छन्, जुन सूचकांक हो कि उच्चतम बजार पूँजीकरण संगै कम्पनीहरु लाई समूहबद्ध गर्दछ।
एक निरन्तर बजार को पर्यवेक्षण को प्रभारी एक CNMV (राष्ट्रिय धितो बजार आयोग) हो। यसको सट्टा, शासी निकाय BME (स्पेनिश स्टक एक्सचेन्ज र बजार) हो। क्लियरि and र बस्ती को प्रभारी इकाई को लागी, यो Iberclear हो, जो BME को स्वामित्व मा छ।
अब जब कि हामी अधिक वा कम थाहा छ निरन्तर बजार के हो, हामी यो कसरी काम गर्दछ भनेर व्याख्या गर्न जाँदैछौं। जस्तै हामीले पहिले भन्यौं, SIBE विभिन्न प्रतिभूतिहरु बाट बनेको छ। यी मध्ये धेरै सामान्य भर्ती को हिस्सा हो। यो, बारी मा, एक निरन्तर बजार मा आधारित छ कि विभिन्न आदेशहरु द्वारा संचालित छ। यसको मतलब के हो? खैर के मूल्य खरीद प्रस्ताव र बिक्री प्रस्ताव को बीच क्रस बाट बनेको छ। व्यापार घन्टा को सन्दर्भमा, हामी यसलाई पछि टिप्पणी गर्नेछौं।
यो पनि ध्यान दिनुपर्छ कि हामी SIBE भित्र धेरै खण्डहरु पाउन सक्छौं। हामी तिनीहरूलाई तल टिप्पणी गर्न जाँदै छौं:
सामान्य शेयर ट्रेडिंग खण्ड: यो सबै भन्दा राम्रो ज्ञात छ र यो पनि स्पेन मा खुदरा लगानीकर्ताहरु द्वारा प्रयोग गरीन्छ।
MAB (वैकल्पिक स्टक मार्केट): यो बजार २०० 2008 मा बनाईएको थियो ताकि ती कम्पनीहरु जसको बजार पूँजीकरण कम भयो वा विस्तार चरण मा थियो पनि सूचीबद्ध गर्न सकियोस्।
ल्याटिबेक्स: ल्याटिबेक्स बजार १ 1999 मा अधिकृत गरिएको थियो। यसको उद्देश्य ल्याटिन अमेरिका मा मुख्य कम्पनीहरु संग सम्बन्धित प्रतिभूतिहरुको यूरोप मा निपटान र वार्ता को लागी एक मंच को रूप मा सेवा गर्ने हो। यो ध्यान दिनुपर्छ कि यी यूरो मा मूल्यहरु छन्।
ETF बजार: ETFs स्पेनिश शेयर बजार संग सम्बन्धित यस खण्ड मा अनुबंधित गर्न सकिन्छ। यी संक्षिप्त रूपहरु लाई मूल रूप मा सूचीबद्ध लगानी कोष को वर्णन गर्दछ।
फिक्सिंग खण्ड: अन्तमा, त्यहाँ फिक्सिंग खण्ड छ। यो ती प्रतिभूतिहरु को लागी लक्षित छ जसको तरलता SIBE भित्र कम छ।
निरन्तर बजार कहिले खुल्छ?
बाहेक जान्न को लागी निरन्तर बजार के हो, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ यसको कार्यक्रम जान्न को लागी यदि हामी सार्वजनिक जान चाहन्छौं। यो स्पेनी शेयर बजार को व्यापार घण्टा बिहान नौ मा शुरू हुन्छ र दिउँसो पाँच तीस मा समाप्त हुन्छ। जे होस्, हामी दुबै खातामा खोल्न र बन्द लिलामी लिनु पर्छ। दुई लिलामी बीचको अवधि "खुला बजार" भनिन्छ।
तर लिलामी के हो? यी शेयर बजार मा व्यापार को लागी समय को अवधि हो। यी अवधिको समयमा, आदेश परिमार्जन, रद्द र प्रविष्ट गर्न सकिन्छ, तर यी कार्यहरु निष्पादित बिना। तिनीहरू मूलतः प्रयोग गरीन्छन् दुबै खुल्ला र बन्द मूल्यहरु सेट गर्न र यस प्रकार अत्यधिक मूल्य उतार चढाव नियन्त्रण।
सारांश र राम्रो संग तालिका को कल्पना गरौं:
खुला लिलामी: बिहान 8.30 देखि 9.00 सम्म।
खुल्ला बजार: बिहान 9.00 देखि 17.30 सम्म।
लिलामी बन्द: बिहान 17.30 देखि 17.35 सम्म।
के कम्पनीहरु निरन्तर बजार गठन?
जान्न को लागी लगातार बजार के हो, यो परिभाषा वा कार्यक्रम जान्न को लागी पर्याप्त छैन। हामीलाई यो पनि थाहा हुनुपर्दछ कि कुन कम्पनीहरूले यसलाई बनाउँछन्। हामीले पहिले नै उल्लेख गरिसकेका छौं, त्यहाँ कुल 130 छन्, ती मध्ये केहि धेरै प्रसिद्ध छन्। हामी तिनीहरूलाई तल सूचीबद्ध गर्नेछौं:
Audax नवीकरण गरियो।
जीआर सी ओसीडेन
Grifols Cl। A
Grifols Cl। B
Inm दक्षिण बाट
रेनो एमएस / ए
रेनो एम। रूपान्तरण
आय २०१ 4
मौलिक वा प्राविधिक द्वारा कम्पनीहरु अध्ययन गर्न सक्षम हुन, यी विभिन्न स्रोतहरु बाट उपलब्ध छन्। सान्दर्भिक घटनाहरु को लागी, जाने को लागी पहिलो स्थान CNMV वेबसाइट मा छ। त्यहाँ पनि अन्य धेरै पूरा जस्तै लगानी, Pcbolsa, infobolsa, आदि को रूप मा छन्। जे होस्, यो याद गर्नुहोस् बजार को एक राम्रो प्रारम्भिक अध्ययन र कम्पनीहरु तपाइँ एक निर्णय गर्न मद्दत गर्नेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » वित्तीय उत्पादनहरू » बोल्सा » निरन्तर बजार के हो
जोन टेम्पलटन उद्धरण
CNMV के हो?